ငါကဲ့သို့ စွမ်းအားနှင့်ပြည့်စုံသော ယောကျားင်္ အတွက် တကိုယ်တည်းကူးမြောက်၍ အဘယ်ကဲ့သို့အကျိုးရှိအံ့နည်း။ငါသည် သဗ္ဗညုတဥာဏ် ရပြီးနောက် နတ်နှင့်တကွသော လောကကို ကူးမြောက်စေအံ့.( ဇာတက နိဒါန်း )
လူ့သားတစ်ယောက် တန်ဖိုးကို တိုင်းတာရာမှာ အတ္တကိုယ်ဖယ်ရှားပြီး အများအကျိုး ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာနဲ့လည်း တိုင်းတာရပါမယ်။
ရှင်သန်သမျှ ကာလလေးမှာ လူဟာ အမြဲကိုလှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေရပါတယ်. အသာလေးထိုင်ပြီး အိပ်စား လုပ်နေခွင့်မရှိပါဘူး ၊ ဗုဒ္ဓအလိုတော်အရဆိုရင်တော့ ဥဋ္ဌာနဖလူပဇီဝီ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ ၊ ဆ၀ါလာတ သုတ္တန်မှာလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောပြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၄ ယောက်ဟာ လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်...။
၁။ ကိုယ့်အကျိုးလဲ မလုပ် ပရဟိတလဲ မလုပ်သူ
၂။ ကိုယ်အကျိုးတော့လုပ်ပြီး ပရဟိတ မလုပ်သူ
၃။ ပရဟိတတော့လုပ်ပြီး ကိုယ့်အကျိုးအတွက် မဆောင်ရွက်သူ
၄။ ကိုယ့်အကျိုးလည်းလုပ် ပရဟိတလည်း ဆောင်ရွက်သူ..
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လည်း ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ရှိတဲ့ လူသားပေါင်း သန်း ၆ ထောင်ကျော်ကို တူရာတူရာ စုရင် ဒီ လေးမျိုးသာ ရကြောင်း ဟောပြတော်မူခဲ့ပါတယ်..။
ဒီလေးယောက်ထဲမှာ ကိုယ့်အကျိုးလည်းလုပ်ပြီး ပရဟိတလည်းဆောင်ရွက်သူကို အမြတ်ဆုံးလူသားအဖြစ် မြတ်ဗုဒ္ဓက သတ်မှတ်တော်မူပါတယ်...။
ဘ၀တခုကို ရောက်လာတဲ့ မိမိတို့တစ်တွေလဲ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်အောင် လူပီသအောင် လူ့နှလုံးသားပီပြင်အောင် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြရပါမယ် ....။ ဘုရားလောင်း ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ စကားဟာ ပရဟိတဆောင်ရွက်ဖို့ တွန်းအားတခုဖြစ်သလို ငါလိုယောကျာင်္းက တယောက်တည်း နိဗ္ဗာန်သွားလို့အကျိုးမရှိဘူး ဒီလောကကြီးထဲက နတ်လူဗြဟ္မာတွေကိုလဲ ကူးမြောက်စေမယ် ဆိုတဲ့ ကျူးရင့်သံဟာ တကယ့်ကို မိမိတို့ နှလုံးသားကို လှုပ်နှိုးနေခဲ့ပါတယ်...။
လူပီသတဲ့လူ မြတ်ဗုဒ္ဓသတ်မှတ်တဲ့ လူမြတ်စာရင်းဝင်အောင် ကျမတို့ တစ်တွေလဲ ကြိုးစားဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်...။
မိမိတို့တတွေဟာ တခဏမျှ လူ့ဘ၀ရကြ။လူထဲသူထဲ လူနဲ့သူနဲ့နေကြ။လူ့ကိစ္စ လူ့ဝတ္တရား လူ့တာဝန်တွေ ယူကြရ ပါတယ်...။
လူ့အတွေး လူ့အမြင် လူ့အသိတွေ သိခွင့်ရကြရစဉ်ကာလမှာ ဘယ်လောက်ကြာအောင် မျိုးဆက်ရှည် တည်တံ့ဦးမယ်မှန်း မသိတဲ့ လူ့လောကအတွင်း လူသားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီမှု ၊ လူသား အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစေမှုတွေနဲ့ လူ့သတင်း လူချင်းဆောင်ကာ လူ့သမိုင်းကောင်းစေဖို့ အလုပ်ကောင်းတွေ လည်း လုပ်ကြရပါမယ်။
အလုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ အဓိက က စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ထက်သန်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ စေတနာသန့်ဖို့တော့ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်..။
မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ အချိန်များစွာ အသက်များစွာ ဘ၀များစွာ စည်းစိမ်ဥစ္စာများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီး ဓမ္မဆိုတာကို ထားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူထားခဲ့တဲ့ ဓမ္မဆိုတာ ဘယ်လောက်များ လောက လူသားတွေကို ကျေးဇူးပြုနေသလဲဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးနားလည် သိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ...။
မိမိတို့တစ်တွေက ကော တိုတောင်းလှသော လူ့ဘ၀ကြီးမှာ နေထိုင်ကြတုန်း မိမိအတွက်ဘာတွေယူပြီး လောကအကြီးအတွက် ဘာတွေထားရစ်ခဲ့ကြမလဲ....ဆိုတာကို စဉ်းစားကြရပါမယ်..။
လောကကြီးထဲက သစ်ပင်တွေဟာ အသီးနဲ့ လောကကြီးကို အကျိုးပြုနေပါတယ်.မြစ်တွေ ချောင်းတွေဟာ အမြဲစီးဆင်းပြီး သန့်စင်တဲ့ရေစင်နဲ့ လောကကြီးကို အကျိုးပြုသလို နေဟာလည်း နေရောင်ခြည်နဲ့ လောကြီးကို အကျိုးပြုနေပါတယ်. လရောင်ဟာလည်း အေးမြတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ လောကကြီးကိုအကျိုးပြုနေပါတယ်.. ဒါတွေဟာ သက်ရှိတွေမဟုတ်သလို အသိဥာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး..ဒီလို သက်မဲ့တွေတောင် လောကကြီးကို ကျေးဇူးပြုနိုင်သေးရင် အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ လူသားဖြစ်တဲ့ မိမိတို့ကရော လူလူချင်း ကျေးဇူးမပြုသင့်ဘူးလား ......။
ဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းတော် ဥဒါန်းကျူးရင့်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်း ..........
လူသားဒုက္ခရောက်တာကို ကိုယ့်နှလုံးသားက ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဒီလူရဲ့နှလုံးသားဟာ သူတော်စင် နှလုံးသားလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး..သူတပါး ဒုက္ခရောက်တာကို မြင်ရရင် ရင်ထဲမှာ တကယ့်ကို နာကြင်စွာခံစား တုန်လှုပ်မှ သူတော်စင်တို့ နှလုံးသားလို့ ဆိုရပါမယ် ။
ဟူ၍ကျမတို့ Metta World Foundation လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ဆရာတော်ဘုရားသည်လည်း အသင်းဝင် လူငယ်အများအား ယခုကဲ့သို့ ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်...။
ဆရာတော်၏ လမ်းညွန်ဆုံးမမှုအတိုင်း ကျမတို့ တစ်တွေသည်လည်း သူတော်စင်တို့ နှလုံးသားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြစေရန် အသက်ရှင်ရန် ကျန်ရှိနေသေးသော အချိန်လေးများတွင် မိမိတို့တက်စွမ်းသရွေ့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရပေလိမ့်မည်...။
သို့မှာသာ မြတ်ဗုဒ္ဓသတ်မှတ်ခဲ့တော်မူခဲ့သည့် ကိုယ့်အကျိုးလည်း လုပ်ပြီး ပရဟိတလည်းဆောင်ရွက်သူ အမြတ်ဆုံးလူသားများအဖြစ် လောက ကမ္ဘာကြီးကို အလှဆင်နိုင်ကြပေလိမ့်မည်..ဖြစ်ပါသည်။
ဒီကနေ့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့ရဲ့ ၀ါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးဖြစ်ပါတယ်...။ဒီနေ့လေး အတွက် အထူးပို့စ်လေးအဖြစ် ပရဟိတစိတ်ဓါတ်များ ရှင်သန်စေရန် ဟူသော ပို့စ်အသစ်လေးတစ်ခု ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...။ ဆရာတော် အရှင် တိက္ခဥာဏလင်္ကာရ ရဲ့ ပရဟိတဆိုင်ရာတရားတော် တချို့မှ ပြန်လည် ကောင်နှုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။လာရောက်လည်ပတ်ကြသူ အားလုံး ပရဟိတစိတ်ဓါတ်များ ရှင်သန်နိုးကြား၍ လောကကမ္ဘာကြီးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာတို့မှ အလှဆင်နိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်...။
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 3:53 PM